महानायक’ प्रकरणमा अन्ततः जीतु नेपालले पनि मुख खोले – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/महानायक’ प्रकरणमा अन्ततः जीतु नेपालले पनि मुख खोले
महानायक’ प्रकरणमा अन्ततः जीतु नेपालले पनि मुख खोले
काठमाडौँ, २९ असार । कलाकार दिपाश्री निरौलाले महानायक राजेश हमाल बारे दिएको प्रतिक्रियाको चर्चा परिचर्चा अझै सकिएको छैन । दिपा श्रीले भन्न खोजेको कुरा जे भए पनि उनको बडील्याङ्ग्वयज ले गर्दा धेरैको गाली खानु पर्यो । धेरैले उनमा अहंकार बढेको आरोप पनि लगाई नै रहेका छन् । तर दिपा श्रीले यस कुराको स्पष्टिकरण दिदै धेरै दिन अगाडी नै माफी समेत मागी सकेका छन् ।
यस काण्डमा दिपाश्रीसंग निकट कलाकारहरुले सुरुमा कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि पछिल्लो समय भने एक पछी अर्कोले आफ्नो बिचार पोख्न थालेका छन् । सुरुमा दिपा कै जोडी भनेर चिनिने निकट कलाकार दिपकराज गिरिले सामाजिक संजालमा व्यंग्यात्मक स्टाटस मात्रै लेखेका थिए । तर पछिल्लो समय भने भिडियो नै सार्बजनिक गर्दै स्पष्ट विचार नै राखेका छन् ।
दिपक राज पछी माग्ने बुढा भनेर चिनिने केदार घिमिरेले पनि आफ्नो विचार लेखि सकेका छन् । त्यसै गरि आज पनि अर्का चर्चित कलाकार जितु नेपालले पनि यस काण्डबारे आफ्नो भावना प्रकट गरेका छन् । उनले आफ्नो विचारलाई यस काण्डको अन्त्य पनि भनेका छन् ।
जितु लेख्छन – ‘विभिन्न अपराध गर्नेहरुलाई पनि जेल हालीन्छ तर अपराधको प्रकृतीहेरेर छुट्छन नी हैन…? ल दिपादिदिले अपराधै गर्नु भएछ, अब छुट्ने बेला भएन..? ”
हुन पनि दिपा श्रीले अन्तर्वार्ता दिएकै २-३ हप्ता बिती सक्यो तर उनलाई सामाजिक संजालमा गाली गलौजको बर्षा अझै सम्म रोकिएको छैन । त्यसैलाई इंगित गर्दै हास्य कलाकार कै हैसियतमा जितु थप लेख्छन – ”म्पुर्ण गाली अध्यायहरु अाजैबाट समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। ईतीश्री..दिपाश्री..अन्तर्वार्ताखन्डे श्रावण महात्तमे छक्कापन्जा समूह गाली अगस्ते समाप्तम सुभम………”
जितु नेपालको पुरा बिचार तल जस्ताको त्यस्तै :
”सबै अध्याय सकिएपछि ईतीश्री म गर्छु है….
हाम्रो समुह को तर्फबाट अा-अाफ्ना भनाई, क्षमा मगाई,अाईसकेपछि मेरो पनि त केही धारणा राख्न पर्यो,अन्तिम अन्तिममा अली अली गाली त खानै पर्यो, परेन….? सबै भन्दा पहिले हामी बिगत लामो समयदेखि संगै काम गरिरहेकोले दिपा दिदीले बोलेका कुराको मैले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्छ, त्यसैले म अादरणिय महानायक राजेश हमाल दाईसँग माफि चाहन्छु, साथै राजेश दादाका सम्पुर्ण सुभ-चिन्तक दर्शकज्युहरु प्रतीपनि क्षमा चाहन्छु ।
यहि बिषयलाई लियर हामीलाई सजक गराउने, हामीले बाटो बिरायौकी भनेर सम्झाउने अादरणिय सिनीयर कलाकारहरु,दर्शकज्युहरु प्रती दुई हात जोडि नमन गर्न चाहन्छु। अहिलेको प्रबिधि को उच्चतम प्रयोग गरि हामीलाई गाली गर्ने, सल्लाह दिने,सजग गराउने,सम्पुर्ण अादरणिय दर्शकज्युहरु प्रति सदा अाभारी छौ।तर बेला यहि हो यहि बेलामा कसैलाई सिध्याउन पर्छ भनेर अत्यन्तै अपशब्द, तल्लो स्तरको गाली,तुच्छ वचन,अस्लिल छाडा गाली गर्नुहुनेअादरणिय ज्युहरुलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहे, हरेक कुरामा नकारात्मक हुने, छाडा शब्द लेख्ने,बोल्ने बानी भनेको खैनि,चुरोट र सराबको नसा जस्तै हो ।
जसरी खैनि,चुरोट,र रक्सि खानेलाई नै असर गर्छ यस्ता बानीले पनि तपाईलाई नै असर गर्छ अरुलाई गर्दैन।त्यसैले यस्ता बानी छोड्न म सबैलाई बिनम्र अनुरोध गर्दछु। दिपादिदीले बोल्दा गल्ती गरेकै हो यसको महसुस स्वयम् उहालेनि गरिसक्नु भयको छ र माफि पनि मागीसक्नु भयो त्यसैले अब उहालाई राम्रो काम गर्ने उत्साह दिउ,सर सल्लाह दिउ,हौसला दिउ। विभिन्न अपराध गर्नेहरुलाई पनि जेल हालीन्छ तर अपराधको प्रकृतीहेरेर छुट्छन नी हैन…? ल दिपादिदिले अपराधै गर्नु भएछ, अब छुट्ने बेला भएन..?
फेरि पनि दुई हात जोडि बिन्ति गर्छु अादरणिय भगवान रुपि दर्शकज्युहरु हामीले तपाईहरुलाई भगवान माने पछि तपाईहरुले पनि भक्त सम्झेर क्षमा न दिने…? मैले यो कुरा किन यति ढिलो लेखेको भनेर पनि कुरा उठ्ला म उमेरका हिसाबले, पपुलरका हिसाबले,कामका हिसाबले यो समुहको सबैभन्दा सानै हु, र म दाजुभाईमा पनि छ जना दाई र दिदिको कान्छो भाई नै हु,त्यसैले कान्छोको पालो लास्टमै अाउछ। मैले यति लेख्दा अझै पनि केही गल्ति भएमा क्षमा माग्दै सम्पुर्ण गाली अध्यायहरु अाजैबाट समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। ईतीश्री..दिपाश्री..अन्तर्वार्ताखन्डे श्रावण महात्तमे छक्कापन्जा समूह गाली अगस्ते समाप्तम सुभम………
प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ दिने भएपछि गाउँलेले ६ दिनमा ३६ क्वीन्टल सलह टिपे